नेपाली मौलिकताको संरक्षणमा समर्पित ‘प्राचीन क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
11206722 529403 4321800 6355519
नेपाली मौलिकताको संरक्षणमा समर्पित ‘प्राचीन क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ (भिडियोसहित)
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार १४:१०
प्रसुन संग्रौला –
धेरैले बिर्सिसकेका, कतिपयका स्मृतिमा मात्र जीवित रहेका अनि नयाँ पुस्ताले देख्न नपाएका परम्परागत नेपाली सामग्रीहरूको प्रयोग गरी चिटिक्क बनाइएको रेष्टुरेन्टको बान्की, त्यसमाथि स्वादिष्ट खान्की !
जहाँ पुग्दा जीवन अतीतको कुनै पल सम्झन थाल्छ, पितापुर्खाले भोगचलन गरेका मौलिक नेपाली सरसामग्रीसँग साक्षात्कार गरेर रमाउन सक्छ । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा त आदिवासी जीवनकै झल्को मिल्ने किसिमले रुखको टुप्पामा बनाइएको कटेजमा बसेर विभिन्न परिकारको स्वादमा जिब्रो फट्कार्न सकिन्छ ।
यहाँ कुरा हुँदै छ, हजारौ रेष्टुरेन्टको भीडमा अलग पहिचान बोक्न सफल ‘प्राचीन क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ को । झापाको विर्तामोडस्थित यो एउटा यस्तो रेष्टुरेन्ट हो जुन हरेक कोणबाट विशेष छ । यहाँ उपलब्ध हुने खानाको परिकार, यहाँको सजावट तथा यहाँ राखिएका विभिन्न सामग्रीहरूले प्राचीनलाई फरक रूप एवं पहिचान दिएका छन् ।
प्राचीनको प्रवेशद्वारमा पाइला टेक्नेबित्तिकै बिलकुलै फरक अनुभूति हुन्छ । त्यहाँ देखिने सजावट र सजावटका लागि प्रयोग भएका वस्तुहरू मौलिक नेपाली परम्पराको साक्ष्य प्रस्तुत गर्छन् । ठेकी, हर्पे, ओखलमुङ्ग्री, ढिकी, जाँतो, बिरिम, कित्लीजस्ता घरायसी सामग्री चिटिक्क सजाएर राखिएका छन् । अनि छन् लाल्टिन र सारङ्गी । अर्कातिर कसौंडी र कित्लीजस्ता पुराना भाँडाहरू सजिएका छन् । त्यस्तै एकातिर हलो गर्वका साथ ठडिएको छ । यति मात्र होइन, पुराना मोडलका टिभी, एमपी थिएटर, ग्रामाफोन, क्यासेटजस्ता संगीत र मनोरञ्जनका सामग्रीलाई पनि सजाइएको छ ।
विशेष गरी प्राचीन नामसँग मिल्दो थिममा यहाँको सजावट गरिएको छ । केही दशकअघिसम्म प्रयोगमा रहेका तर अहिले समयले रिटायर्ड गराएका लोपोन्मुख सामग्रीहरू प्राचीन क्याफे एण्ड रेष्ट्रोको सजावटमा प्रयोग भएका छन् । प्राचीन कुराहरू ‘प्राचीन’मा सौन्दर्यका संवाहक भएका छन् ।
यसका सञ्चालक सिद्धार्थ नवीन उप्रेती हुन् । उनी भन्छन्– ‘अहिले प्राचीनलाई सजाउन राखिएका विभिन्न खालका सामग्रीहरू नै यसको पहिचान बनेका छन् । यहाँ एन्टीक तथा लोप हुदै गरेका वस्तुहरू राख्नलाई संग्रहालय नै बनाइएको छ ।’
विस्मृत हुन लागिसकेका कुराहरू देख्न पाइने प्राचीनका नवीन विशेषताहरू पनि थुप्रै छन् ।
रेष्टुरेन्टमा जाने मूल कारण भनेको नै त्यहाँ पाउने विभिन्न प्रकारका खाना खानलाई हो । त्यहाँका परिकारहरू स्वादिष्ट भएनन् भने सजावट जतिसुकै राम्रो किन नहोस् ग्राहकहरूको मन भड्किन्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर प्राचीनले खानपानको मामिलामा आफूलाई निकै सचेत तुल्याएको छ भन्छन् यसका सञ्चालक उप्रेती ।
व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि त्यसमा आर्थिक हिसाबले सफल हुन पनि जरुरी हुन्छ, व्यापारको मूल उद्देश्य पनि त्यही नै हो । तापनि यसले व्यापारमात्र गरेको छैन, आफ्नो ठाउँबाट राज्यलाई योगदान दिइरहेको छ ।
प्राचीनमा भ्रमण वर्ष २०२० का लागि कस्तो तयारी गरिएको छ त ? उप्रेती भन्छन्– ‘यहाँ पर्यटकलाई खुसी पार्न चाहिने आधारभूत कुराहरू उपलब्ध छन् । र, भ्रमण वर्ष २०२०को लागि हामीसँग यस्ता योजना छन् ।’
थप जानकारी भिडियोमा हेर्नुहोस् :
कसौंडी, झापा, ठेकी, पितापुर्खा, प्राचीन क्याफे एण्ड रेष्ट्रो, विर्तामोड, स्वादिष्ट खान्की
Prevमृतकमध्ये १० जनाको सनाखत (अपडेट)
छाडा गाईबाच्छा संरक्षणका लागि जुट्न थाल्यो सहयोगNext
झापामा थप एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
कालोबजारी गर्ने झापाका २६ पसललाई कारवाही
झापामा तीन सातादेखि १० रुपैयाँमै खाना (भिडियोसहित)